Budata Mouse Recorder maka Windows
Budata Mouse Recorder
Free Budata maka Windows (0.60 MB)
Budata Mouse Recorder,
Mouse Recorder bụ onye na -edekọ òké dị elu nke na -enye gị ohere ịdekọ macros wee mee ha ka emechaa rụọ ọrụ dị iche iche.
Budata ndekọ òké
Mouse Recorder bụ mmemme Windows pere mpe nke nwere ike ịdekọ mmegharị òké gị niile wee megharịa ha nke ọma dabere na ntọala akọwapụtara onye ọrụ. Ihe omume a na-eji interface onye ọrụ ahaziri nke ọma yana ọtụtụ nhọrọ. Mgbe ịchọrọ ịdekọ otu nnọkọ, pịa bọtịnụ ma ọ bụ ụzọ mkpirisi keyboard na interface. Ị nwekwara ike gbanyụọ ndekọ mgbe ịmechara mmegharị òké. Ị nwere ike megharịa ihe ahụ e dere ede naanị otu ugboro ma ọ bụ ọtụtụ ugboro. Enwekwara ọtụtụ nhọrọ nhazi ọzọ. Dịka; ị nwere ike ime ka mmemme ahụ megharịa ihe ahụ ọtụtụ nkeji notu oge.
Usoro ihe omume maka ịdekọ mmegharị òké na -akwụsị kọmputa na -akpaghị aka mgbe usoro a mechara. Ị nwere ike ịtọ oge igbu oge netiti ugboro ugboro abụọ ma ọ bụ dozie ntọala ọsọ ka ịmegharịa. Ị nwere ike ịdekọ ihe omume karịrị otu ihe, mgbe ahụ ị nwere ike họrọ ya na listi.
Ihe omume a na -eji ngwa pịa ihe òké. Mouse Clicker na -edekọ omume yiri ebumnuche nke mmemme a. Enwere ike ịhazi ngwa ahụ iji pịa bọtịnụ aka ekpe, aka nri ma ọ bụ netiti. Enwere ike kenye ya dị ka otu ọpịpị ma ọ bụ pịa ugboro abụọ.
Mouse Recorder bụ mmemme mara mma nke nwere ike ịba uru mgbe ịchọrọ ịme ihe ugboro ugboro na kọmpụta.
Mouse Recorder Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.60 MB
Mmepụta: Robot Soft Studio
Mouse Recorder bụ onye na -edekọ òké dị elu nke na -enye gị ohere ịdekọ macros wee mee ha ka...
Gịnị bụ Telegram? Telegram bụ usoro izipu ozi nefu nke na-apụ apụ maka nchekwa / ntụkwasị obi....
Fizy bụ ọrụ egwu ebe ị nwere ike nweta ọba egwu kachasị ọhụrụ na niile nke ndị na -ese ihe kachasị...
Tweetium bụ onye ahịa Twitter maka maka mmetụ na ngwaọrụ Windows 8.1 mara mma. Na mgbakwunye na...
Excel Online bụ nsụgharị free nke Microsoft Excel anyị na-eji emepụta akwụkwọ. Site na ịbanye na...
Timber na-eweta Tinder, ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị jiri obere ọnụ ọgụgụ ndị lụrụ di na nwunye,...
Enwere m ike ịsị na Tapatalk bụ ngwa ga-aba ezigbo uru ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-esokarị nzukọ a...
VKontakte bụ ebe a na-akparịta ụka nsocialntanet na Russia na Ukraine. Site na ngwa Windows 8, ị...
PowerPoint Online bụ Lightened mbipute nke PowerPoint, nke bụ akụkụ nke ngwanrọ Microsoft Office....
Maxnote bụ ihe edeturu iji ngwa ị nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma na sistemụ arụmọrụ Windows. Maxnote...
MixRadio bụ ngwa egwu ahaziri iche nke Microsoft mepụtara wee nye ndị ọrụ Lumia naanị. MixRadio,...
Ọ bụ ezie na Spotify, Apple Music na Tidal kpuchiri Deezer na mba anyị, ọ bụ ngwa na -ege ntị nke...